सताउला है जाडोले- कोपिला - कान्तिपुर समाचार
सताउला है जाडोले
कार्तिक १७, २०७६ अतुल मिश्र
यो वर्षको जाडोयाम सुरु भएको छ  । यो मौसममा सचेत नरहे, सुरक्षाका उपाय नअपनाए विशेषगरी बुढापाका र बालबालिका बढी स्वास्थ्य समस्याको जोखिममा रहन्छन्  ।
जाडोबाट बच्न लवाइ–खुवाइ र आनीबानीमा विशेष चनाखो हुनु जरुरी छ । अभिभावक, शिक्षक र स्वयं बालबालिकाले जाडोबाट जोगिने उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
जाडोले रुघाखोकी, निमोनिया, श्वास–प्रश्वासमालगायतका स्वास्थ्यसम्वन्धी समस्या बढाउँछ । चिसोले छालामा पनि समस्या ल्याउन सक्छ ।
बदलिँदो मौसमसँगै हाम्रो शरीरको आवश्यकतामा समेत विशेष ध्यान दिनुपर्छ । उचित सुरक्षाका उपाय नअपनाए जाडोमा छिट्टै बालबालिका बिरामी पर्ने र शारीरिक समस्या देखिने हुन्छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार जाडोयाम स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले राम्रो मानिन्छ । केही सतर्कता र उचित लुगाफाटोको उपयोगले यो मौसममा समेत बालबालिकाले आफ्नो स्वास्थ्य सन्तुलित राख्न सक्छन् ।
पर्याप्त पानी पिऔँ
गर्मीयामको दाँजोमा जाडोयाममा बालबालिकाले उचित मात्रामा पानी नपिउने समस्याले अभिभावक हैरान हुन्छन् । यो अत्यन्त शुष्क मौसम हो । यसैले बालबालिकामा मात्र नभएर वयस्कहरूको शरीरमा समेत पानीको कमी हुनु हुँदैन । खानासँगै पोसिलो झोल पदार्थसमेत सेवन गर्नु फाइदाजनक हुन्छ ।
हाम्रो शरीरको तौलको करिब दुई तिहाइ भाग पानी हुन्छ । यसको माध्यमले पोषकतत्त्व पाइन्छ भने पानीले हाम्रो शरीरबाट फोहोर पदार्थ बाहिर निकाल्नसमेत सघाउँछ । यति मात्र नभई तापक्रम नियन्त्रणलगायत शरीरमा भएको जोर्नीहरूलाई मुलायम राख्न र शरीरमा हुने थुप्रै रासायनिक प्रतिक्रियाका लागि पनि पर्याप्त मात्रामा पानी आवश्यक छ ।
शरीरलाई पानी आवश्यक हुनासाथ हाम्रो मस्तिष्कले स्वचालित रूपमा थाहा पाउँछ । यसपछि तिर्खा लागेको संकेत दिन्छ र हामी पानी पिउँछौं । यसैले अलिकति मात्रै इच्छा भए पनि तुरुन्त पानी पिउनुपर्छ ।
उपयुक्त लुगाफाटो लगाऔं
जाडोयाममा हाम्रो पुर्खाहरूले बालबालिका मात्र नभई वयस्क र बूढापाकालाई समेत टाउको टोपीले छोप्ने सल्लाह दिन्छन् । यो अत्यन्त वैज्ञानिक सल्लाह हो । किनभने जाडो याममा शरीरको धेरैजसो न्यानोपना टाउकोकै माध्यमले बाहिर निस्किन्छ । अझ जाडोमा कानसमेत छोप्ने गरी टोपी वा लुगाफाटो लगाउनु उपयुक्त मानिन्छ ।
यो मौसममा एउटा बाक्लो लुगा लगाउनुको सट्टा दुई/तीनवटा लुगा लगाउँदा शरीर चिसोबाट बढी जोगिन्छ । ‘एउटा बाक्लो लुगाको सट्टा तीनवटा पातलो लुगा लगाउँदा शरीरलाई बढी न्यानो राख्न सकिन्छ,’ वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ प्रा.डा.चन्देश्वर महासेठ भन्छन्, ‘बच्चालाई धेरै बढी ऊनीका लुगा लगाउनु राम्रो मानिँदैन । आवश्यकभन्दा बढी लुगा लगाए पसिना आएर उल्टै चिसो लाग्ने सम्भावनासमेत हुन्छ ।’ स्कुल जाने बालबालिकाले बिहान धेरै न्यून तापक्रममा बाहिर निस्कनुपर्दा उनीहरूलाई चिसोले बढी सताउने गर्छ । यसैले बिहान स्कुल जाँदा र बेलुका घरबाहिर खेल्न लाग्दा लुगाफाटामा विशेष ध्यान राख्नुपर्छ । मुलुकको उत्तरी भागमा हिउँसमेत पर्ने गरेकाले यो मौसममा हिउँ वा वर्षाबाट भिजेको लुगाफाटो वा जुत्तालाई तुरुन्त फुकाल्नुपर्छ ।
बालबालिकाका लागि १०० प्रतिशत प्राकृतिक हावा ओहोरदोहोर गर्ने रेसा (फाइबर) भएको कपासले बनेको लुगा उपयुक्त हुन्छ । ऊन र सिन्थेटिक तन्तुजस्तै एक्रेलिन, पोलिस्टरले छालामा जलन उत्पन्न गर्न सक्छ ।
नरम साबुन प्रयोग गरौं
धेरैजसो घरमा एउटै साबुन बूढापाकादेखि बालबालिकासम्मले प्रयोग गरिन्छ । जाडोमा बालबालिकाले लगाउने साबुन नरम खालको हुनुपर्छ । यस्तो साबुनमा रसायनको मात्रा बढी हँॅदैन ।
विज्ञहरूका अनुसार बालबालिकाले लगाउन मिल्ने कम रसायन हालिएका साबुन पनि पाइन्छन् । यो मौसममा साबुनको अत्यधिक नभएर समुचित मात्र प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ । साबुनले बालबालिकाको छालालाई झन सुक्खा बनाउँछ ।
अमेरिकन एकेडेमी अफ डर्मेटोलजी (एएडी) का अनुसार जाडो याममा हुने सुक्खा हावा, कम तापक्रम, हिटर आदिले घर/कोठा तताउनुले पनि बालबालिको छालामा समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ । छालाको एक प्रकारको समस्या ‘एक्जिमा’ समेत बढ्न सक्छ । यसैले हरेक पटक मनतातो पानीले नुहाएपछि छालामा तेल, मोइस्चराइजर आदि लगाउनुपर्छ ।
जीउमा तेल लगाऔं
बूढापाका, बयस्कको दाँजोमा बालबालिकाको छाला धेरै संवेदनशील हुन्छ । चिसोले बालबालिकाको छालामा नकारात्मक असर गर्छ । यसैले यो मौसममा बालबालिकाले आफ्नो छालामा मोइस्चराइजर वा नरिबललगायतका स्थानीय रूपमा उपलब्ध जीउमा लगाउन सकिने वनस्पतीबाट बनेको तेल लगाउनुपर्छ । परम्परागत रूपमा जाडोयाममा तेल लगाएर नुहाउने र नुहाएपछि समेत जीउमा तेल लगाउने चलन गाउँघरमा अझै छ । यो अत्यन्त वैज्ञानिक चलन हो । नुहाएपछि जीउमा तेल लगाउन बिर्सनुहुन्न ।
आगो ताप्दा कोठा बन्द नराखौं
झ्याल ढोका बन्द राखी जाडोमा आगो ताप्नाले बालबालिकासँगै उनीहरूका अभिभावकसहितको परिवार निस्सासिएर मृत्यु भएका थुप्रै घटना छन् । यसैले कोठामा रुम हिटर, मकल भए सबै झ्याल, ढोका लगाउनु हँॅदैन, हावा ओहोरदोहोर गर्ने राम्रो व्यवस्था हुनुपर्छ ।
‘कहिलेकाहीं यस्तो धुवाँले स्वस्थ बालबालिकाको समेत मृत्यु हुने गरेको छ,’ डा. महासेठ भन्छन्, ‘किरोसिन हिटर राम्रो होइन । ग्यास र बिजुलीको हिटर ठीक छ । तर कोठामा हावाको प्रवाह राम्रो हुनुपर्छ ।’
कोठामा निरन्तर हिटर चलाउनु भने हुँदैन । रुम हिटरलाई बीचबीचमा केही समयका लागि बन्द गर्दै रहनुपर्छ । रुम हिटर भएको ठाउँमा पानीले भरेको एउटा भाँडो राख्नु फाइदाजनक हुन्छ । यसले कोठामा अक्सिजन र आद्रताको स्तर सन्तुलित रहन्छ । घरभित्रको हावा सुक्खा लागे आजकाल बजारमा पाइने ‘ह्युमिडिफायर’ समेत उपयोग गर्न सकिन्छ ।
घरभित्र आगो ताप्दा बालबालिकाले यसको धेरै नजिकसमेत बस्नु हुँदैन । यसले छालामा समेत असर गर्न सक्छ ।
भाइरल संक्रमण र रुघाखोकीबाट बचौं
प्रा.डा. चन्देश्वर महासेठका अनुसार जाडोयाममा बालबालिकामा भाइरल संक्रमण र रुघाखोकीको समस्या सबैभन्दा बढी देखिन्छ । रुघाखोकी, ज्वरोको किटाणु एकबाट अर्कोमा सर्ने भए पनि रुघाखोकी लागेका बालबालिकाले घर बस्नभन्दा स्कुल नै जान रुचाउँछन् । यस्तो अवस्थामा आफूलाई छिटो निको हुन र अरूलाई समेत संक्रमण हुन नदिन थप सकर्तता अपनाउनुपर्छ । खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा मुखमा रुमाल राख्नुपर्छ । रुमाल नराखे मुखबाट निस्किने स–साना पानीका छिटासँगै किटाणु छेउछाउमा फैलिन्छ । त्यो किटाणु फैलिएको वातावरणमा सास लिने अन्य व्यक्तिसमेत रुघाखोकीबाट संक्रमित हुने सम्भावना बढ्छ । यसैले विशेषज्ञहरू रुघाखोकीको संक्रमण भएका बेला स्कुल नगई घरमै स्याहार गरेर स्वास्थ्य लाभ लिनु राम्रो मान्छन् ।
अमेरिकास्थित सेन्ट्रर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन (सीडीसी) को रिपोर्टअनुसार रुघाखोकीकै कारण बर्सेनि विश्वका बालबालिकाको स्कुलका २ करोड २० लाख दिन खेर जाने गरेको छ । चिकित्सकीय तथ्यांकहरूअनुसार स्कुल जाने र प्राथमिक कक्षामा पढ्ने बालबालिका एक वर्षमा तीनदेखि १२ पटकसम्म रुघाखोकीबाट पीडित हुन्छन् ।
जाडोमा आद्रतामा कमी हुन्छ । रुघाखोकी फैलाउने भाइरस आद्रता कम हुने समयमा बढी बाँच्छ । जाडोमा नाकसमेत सुक्खा रहने भएकाले भाइरसजन्य संक्रमणको सम्भावना बढ्छ । सामान्य रुघाखोकी चार–पाँच दिनमा आफैं निको हुने भए पनि बालबालिकालाई उच्च खोकी, ज्वरोमा वृद्घि, सास फेर्न गाह्रो भए तुरुन्त चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्छ ।
कहिलेकाहीं रुघाखोकी कुनै गम्भीर रोगको लक्षणसमेत हुन सक्छ । रुघाखोकी हँॅदा सान फेर्न गाह्रो हुनु वा छिटो–छिटो सास फेर्नु निमोनियाको लक्षण हुन सक्छ । निमोनिया फोक्सोको संक्रमण हो । यो प्राणघातक हुने भएकाले तुरुन्त स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार गराउनु आवश्यक पर्छ ।
प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७६ ११:५९
कार्तिक १०, २०७६ कान्तिपुर संवाददाता
धेरै वर्षपछि ममीबाबासँगै प्रतिभा तिहार मनाउन गाउँको घर पुगिन्  । पुग्दा साँझ परिसकेको थियो  ।
त्यहाँ हजुरबा र हजुरआमा मात्र हुनुहुन्थ्यो । ममी र बाबासँगै प्रतिभाले पनि उहाँहरूलाई दर्शन गरिन् । साँझ झमक्क परिसकेको र थाकेको हुनाले खाना खाएर चाँडै नै उनीहरू सुते ।
भोलिपल्ट बिहानै उनले हजुरबासँग गाउँका सरिता, पवित्रा, सरोज, सौरव, सुमन, सौगात, समीक्षालगायत सबै साथीहरूको हालचाल सोधिन् । सबैको खबर ठीकै भएको हजुरबाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नातिनी, तिमीलाई पनि उनीहरूले सोधिरहन्छन् । कहिले आउँछिन् भन्छन् ।’ हजुरबाको कुराले प्रतिभालाई साथीहरू अहिल्यै भेटूँ लाग्यो । उनी नजिकैको साथी समीक्षाको घरमा गइन् ।
समीक्षाको घरमा पुग्नासाथ उनीहरूले आपसमा अँगालोमा बाँधिएर माया साटासाट गरे । एकअर्काको हालचाल सोधे । केही बेरमै सौरव र सौगात पनि त्यहीं आइपुगे । खुसीले उनीहरू निकै रमाए । प्रतिभाले भन्न थालिन्, ‘यसपालिको तिहारमा हामी कसरी रमाइलो गर्ने हो साथीहरू ? हामी त सानोमा पनि केही न केही गर्थ्यौं, अहिले त ठूला भइसकेका छौं । निकै रमाइलो गर्नुपर्छ ।’
सुमनले भने, ‘के गर्नू नि, पिङ खेल्ने, पटाका पड्काउने त्यही त हो । रमाइलो भइहाल्छ नि ।’
सौरवले चंगा उडाउने कुरा गरे । यस्ता कुरा गर्दागर्दै पवित्रा पनि आइपुगिन् । उनले पनि सबै मिलेर वनभात खाने र लुकीडुम खेल्ने कुरा गरिन् । केही बेर कुरा गरेर उनीहरू १० बजे समीक्षाकै घरमा फेरि भेट्ने निधो गर्दै फर्किए ।
पवित्राको घर जाने बाटोमै सरोज र सरिताको घर पर्थ्यो । उनीहरू दाजुबहिनी थिए । उनीहरूलाई पनि १० बजे समीक्षाको घरमा भेला हुने कुरा गरेर पवित्रा आफ्नो घरतर्फ लागिन् ।
सबै जना समीक्षाको घरमा भेला भए । प्रतिभाले कापी कलम बोकेर आएकी थिइन् । यसपालिको तिहारमा गाउँघरमा देउसीभैलो खेलेर रमाइलो गरौं भन्ने प्रस्ताव राखिन् । सबैले उनको प्रस्ताव स्विकारे । त्यसपछि प्रतिभाले भनिन्, ‘अब भन, तिमीहरूमध्ये क–कसले केके क्रियाकलाप गर्ने ?’ कसैले भट्याउने, कसैले नाच्ने, कसैले गाउने, कसैले मादल बजाउने, कसैले भेटी संकलन गर्ने जिम्मेवारी लिए । प्रतिभालाई खुसी लाग्यो । उनले अब हामी रियर्सल गर्नुपर्छ भनिन् ।
सबै जना समीक्षाकै घरमा भेला भएर रियर्सल गर्न थाले । देउसेभैलो भट्टयाउनेका साथै नाचगानको पनि अभ्यास गरे । प्रतिभाले गितार बजाएर तिहारको गीत गाउने बनाइन् ।
लक्ष्मीपूजा र भोलिपल्ट गोवर्धन पूजाको साँझ उनीहरू देउसीभैलो खेल्ने भए । समीक्षाको घरबाट सुरु गरे । उनीहरूको प्रस्तुति देखेर समीक्षाका परिवारले धेरै स्याबासी दिनुभयो । भेटी पनि धेरै राख्नुभयो । उनीहरूलाई ठूलै हौसला भयो । त्यसपछि उनीहरू उत्साही भएर देउसीभैलोका लागि अन्य घरमा गए ।
लगभग गाउँका सबै घरमा दुई दिन देउसीभैलो खेले । उनीहरू साह्रै खुसी भए । दान दक्षिणा पनि राम्रो कमाए । निकै थाकेकाले सबै आआफ्नो घरमा गएर सुते ।
भाइटीकाको दिन उनीहरू सबै आआफ्नो घरमा टीका लगाएर फेरि सदीक्षाकै घरमा भेला भए । उनीहरूले संकलन भएको पैसा के गर्ने भन्ने छलफल थाले ।
सरोजले भने, ‘कति हुन्छ ? सबैलाई भागबण्डा गरेर बाँडौं न ।’
‘बरु भोलि नै पिक्निक जाऔं,’ पवित्राले भनिन् । अरू साथीहरू भने बोलेनन् । सहरबाट गाउँ आएका प्रतिभा, सुमन र सौगातहरूको भोलिपल्टकै टिकट थियो ।
सबैको कुरा सुनिसकेपछि प्रतिभाले प्रस्ताव राखिन्– ‘यो पैसा र चामल कसैले पनि नलैजाऔं । हामीले सामाजिक काम पनि गर्न सिक्नुपर्छ । पर खोला नजिकै भएको वृद्धाश्रममा लगेर त्यहाँका आमाबुबाका लागि दान गरौं ।”
प्रतिभाका कुरा केही साथीहरू मान्न तयार भएनन् । केही साथीले भने स्विकारेर मुन्टो हल्लाए ।
प्रतिभाले फेरि भनिन्, ‘हेर साथीहरू, अब हामी ठूला भइसक्यौं । हामीले पढेका कुरा व्यवहारमा उतार्न सिक्नुपर्छ । म पनि तिमीहरू जस्तै साथी हुँ नि । मलाई पनि पैसा पाए खर्च गर्न मन लाग्छ । तर हामीमा मानवताको भावना हुनुपर्छ । आफ्नो समाज निर्माण आफैले गर्नुपर्छ । हामीले यो दान आश्रममा लगेर सुटुक्क नदिऊँ । हाम्रा परिवारका एकदुई जना सदस्य, वडा अध्यक्ष, गाउँका मान्नेगुन्ने मान्छेलाई पनि आजै गएर भनौं र हामीले यो दान प्रदान गरौ ।”
प्रतिभाका कुराले सबैको मन छोयो । ‘हुन पनि हो, टोलटोलका साना ठूला जोकोही मान्छेको देउसी खेल्नुको मूल उद्देश्य पिक्निक जाने हुन्छ । हाम्रो कामले उनीहरूको पनि आँखा खुल्नेछ । समाज सेवाको भावना उनीहरूमा पनि आउनेछ,’ सरोजले गम्भीर भएर भने । सदीक्षाले थपिन्, ‘हुन्छ हुन्छ । धेरै राम्रो हुन्छ । तर कहिले गर्ने ?’
उनको कुरा सुनेर प्रतिभाले भनिन्, ‘अहिले नै गएर हामी आआफ्ना घरमा सबै कुरा भनौं । हाम्रा अभिभावक जोजो भ्याउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई लिएर गाउँका बुद्धिजीवी र वडा अध्यक्षकहाँ पनि अहिले नै जाऔं । भरे साँझसम्मा यो दान दिने व्यवस्था मिलाऔँ न ।” प्रतिभाको प्रस्तावमा सबै सहमति भए ।
सबैले आआफ्ना घरमा गएर यो कुरा सुनाए । घरका सबै मान्छे छक्क परे । कसले ल्यायो यो योजना ? भनेर प्रश्न पनि गरे । गाउँका बुद्धिजीवी र वडा अध्यक्षकहाँ प्रतिभाका हजुरबा, सदीक्षाका बा र सबै साथीहरू गए । सबैले उनीहरूको तारिफ गरे ।
सााझपख आमन्त्रित सबै जना प्रतिभाकै घरमा भेला भए । धेरै ढिला नगरी उनीहरू गाउँको वृद्धाश्रममा गए ।
आश्रममा औपचारिक रूपमा कसरी कार्यक्रम गर्ने भन्ने पनि उनीहरूले तय गरेका थिए । पवित्रा र सरोजले कार्यक्रम सञ्चालन गरे । सदीक्षाले यसको श्रेय प्रतिभालाई दिँदै छोटो मन्तव्य राखिन् । वडा अध्यक्ष श्याम रोकाया र गाउँका बुद्धिजीवी हर्क खड्काले पनि आफ्नो विचार राख्नुभयो ।
आश्रमका वृद्धा बुबाआमाहरूले हर्षका आँसु पुछ्न थाले । आश्रमका एक बूढाबाले भन्नुभयो, ‘यस्तो योजना कसले गरेको बा ?’ सदीक्षाले भनिन्, ‘हामी यही गाउँका साथीसाथी मिलेर गरेका हौं बा ।’ वडा अध्यक्षलगायत सबैले प्रतिभा र उनका साथीहरूलाई स्याबासी र धन्यवाद दिए ।
छोटो समयमा नै सानो भए पनि सार्थक काम गरेकोमा सबैका लागि यो खुसीको क्षण भएको अनुभूति साटासाट गर्दै सबै साथीहरू आ–आफ्नो घरतर्फ लागे ।
प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७६ १०:५०